Ixabiso eliphantsi leHydraulic Organic Waste Composting Turner Machine Suppliers kunye neFektri | YiZheng
Inkqubo ye- Umatshini weHydraulic Organic Waste Composting Turner esetyenziselwa ukuvundiswa kwenkunkuma yendalo efana nemfuyo kunye nomgquba weenkukhu, inkunkuma yamdaka, iswekile yokuhluza izityalo, imigubo yesonka kunye ne-sawdust ye-straw. Esi sixhobo samkela uhlobo oludumileyo lwe-groove ye-teknoloji ye-aerobic Fermentation, yenza inkunkuma ye-organic ngokukhawuleza yanyamalala, yanyanzeliswa, yapheliswa, yaqonda injongo yokungabi nabungozi, inkunkuma yokurisayikilisha kunye nokunciphisa ukuqhubekeka, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nomgangatho wemveliso ozinzileyo.
Yintoni i-Hydraulic Organic Waste Composting Turner Machine?
Inkqubo ye- Umatshini weHydraulic Organic Waste Composting Turner ukufunxa iingenelo zeteknoloji yokuvelisa phambili ekhaya nakumazwe aphesheya. Isebenzisa ngokupheleleyo iziphumo zophando lwe-biotechnology ephezulu. Izixhobo zidibanisa itekhnoloji yolawulo oluhlanganisiweyo, olombane kunye nombane. Ngelixa kungenisa umoya kunye nokufaka ioksijini kwizinto zokwenza umgquba, inokulawula ngokuchanekileyo iqondo lobushushu kunye nokufuma kwezinto zokwenza umgquba ukwenzela ukuba izinto zomgquba zivuthwe ngokukhawuleza, ezinokukhawulelana neemfuno zemveliso enkulu yokwenza umgquba wesichumiso sezinto eziphilayo.
Iimpawu zokuPhakamisa iCompacting Turner
1) Ukulungele ukujika kunye nokuvumba kwenkunkuma yendalo, enje, inkunkuma yamdaka, udaka lokucoca iswekile, ikhekhe elibi le-slag kunye ne-sawdust ye-straw.
2) Isetyenziswa ngokubanzi kulinyelo lomgquba kunye nokususwa kokunyakama kokusebenza kwesichumiso somgquba, isichumisi, indawo yokulahla udaka, ikhosi yokulima nokulima ikhowa.
3) Ingasetyenziselwa ukubola kwelanga, itanki yokubila kunye nomatshini ohambayo, njl.Naye umatshini oshukumayo unokuqonda ngakumbi umatshini osetyenziswayo ekusebenzeni.
I-4) Ifakiweyo kunye nezinto zayo ezixhasayo inokuba kukuqhubeka kokukhutshwa kwesambuku.
5) ukusebenza ngokukuko, ukusebenza ngokutyibilika, ukomelela okuzinzileyo, nkqu nokujika.
I-6) Ikhabhinethi yolawulo oluphakathi, inokufezekisa incwadana okanye umsebenzi wokulawula ngokuzenzekelayo
I-7) Exhotywe nge-starter ethambileyo, umthwalo wempembelelo yokuqalisa usezantsi
8) Ukuxhotyiswa ngezinyo zokunyusa i-hydraulic system.
9) Limit switch switch, dlala indima ekhuselekileyo kunye nomda.
Umgaqo-nkqubo wokuSebenza ngokuQinisa iHydraulic
Shaft ephambili Ukuphakamisa i-Hydraulic Composting Turner isebenzisa ibha yemela ende enesiphetho esisekhohlo nasekunene kunye nesinqe esincinci se-shaft, ukuze umatshini akwazi ukuguqula umbandela ngokulinganayo, unokuqina kwegesi elungileyo, izinga lokuqhekeka okuphezulu kunye nokumelana okuphantsi. Icandelo lokuhambisa lamkela i-pitch drive drive enkulu, eyenza ukuba amandla asebenze phezulu, ingxolo iphantsi, ukusebenza kuzinzile, kwaye isiliphu asikho mtyibilizi. Imilo itywiniwe ngokupheleleyo, ikhuselekile kwaye ithembekile. Isixhobo silawulwa ngokupheleleyo ngebhokisi enye, isenza ukuba kube lula kwaye sikhuseleke ukusebenza.
Ukuphakamisa isiQinisekiso ngeHydraulic Umboniso weVidiyo
Ukuphakanyiswa kweHydraulic Ukuphakamisa uMqukumbelo weModeli yokujika
Isantya sokuhamba (m / min)
Umthamo (m³ / h)
15 + 15 + 0.75
18.5 + 18.5 + 0.75
Egqithileyo Uhlobo lwe-Crawler Uhlobo lwe-Waste Waste Composting Turner yoMatshini
Okulandelayo: Tank Ukuvundla Tye
Intshayelelo Yeyiphi Inkunkuma Eme nkqo kunye naManzi weTanki? Inkunkuma nkqo kunye neManyolo yokuvumba itanki ineempawu zexesha elifutshane lokuvundisa, gubungela indawo encinci kunye nendawo enobuhlobo. Itanki evaliweyo ye-aerobic Fermentation ineenkqubo ezilithoba: inkqubo yokondla, isililo reactor, hydraulic drive system, ventilation sys ...
Intshayelelo Luluphi uhlobo lwe Wheel Composting Turner Machine? Uhlobo lwevili lokuGaya umGquba weTurner sisixhobo esibalulekileyo sokubila kwizityalo ezinkulu zokwenza isichumiso. Ukujika komgquba onamavili kunokujikeleza uye phambili, ubuye umva kwaye ngokukhululekileyo, zonke ezo zinto ziqhutywa ngumntu omnye. Iivili zokufaka umgquba ezinamavili zisebenza ngaphezulu kwetape ...